विरोध गर्छु, मौन भै सकिन्न बस्न क्यै गरी !
अबोध “निर्मला” झनै उठाउँछिन् घरीघरी !
न पर्छ नीद रातमा न जाग्छ भोक आँतमा !
म न्याय माग्छु देशमा अगाडि नै सरीसरी !!
“झुमेर भन्दछन् यहाँ शरावमा छ जिन्दगी !
नदी बनेर उर्लिने बहावमा छ जिन्दगी
ढुकेर बस्दछन् सधैँ कुपात्र चोक चोकमा
छ हिँड्नु तीक्ष्ण धारमा धरापमा छ जिन्दगी !”
म भाग्य हेर्न हुन्न है भनेर कर्म गर्दछु
र हार्न हैन राष्ट्रमा जितेर मर्न खोज्दछु
अनेकपल्ट पाइला सरे पछाडि फर्किए
लडेँ भनें अवश्य नै म फेरि उठ्न जान्दछु !
निचोरेर यो देश आफू रमाए
मिली माफियासङ्ग सक्दो कमाए
बनाएर कङ्गाल नेपाललाई
यिनै भ्रष्ट नेताहरू छम्छमाए !
यहाँ थापिएको अनेकौं छ पासो
बढेको छ धेरै यसै भित्र चासो
कठै ! मारिइन् निर्मला खै निसाफ ?
कहाँ मिल्छ त्यो न्याय गर्छौं गुनासो !!
बग्यो आँसुको भेल को रोक्न सक्छ !
अनेकौं व्यथा- नेल को बोक्न सक्छ !
“धनी” जोसुकै जत्ति नै गर्व पालोस्
यहाँ प्रेमको मोल को तोक्न सक्छ !!
तिमी साथमा छौ र बाँचें खुसीले
बज्यो गीत भित्रै र नाचेँ खुसीले
गरौँ स्वप्न-यात्रा दुबै सङ्गसङ्गै
मिठो प्रेम नै प्रेम साँचें खुसीले !!
फूल्नै नपाई कोपिलामै सुटुक्क झरें भने
जिन्दगीको महायात्रा बग्दै खोला तरें भने
सम्झी आँसु नबगाउँनु फूल नचढाउँनु
तिम्रै कारण यदि म अल्पायु मै मरें भनें ।।
जस्तो थियो हिजो यो काया उस्तै छ आजपनि
वर र पिपलको छाया उस्तै छ आजपनि
फेरियौ सिर्जना तिमी फेरियौ कसरी भन्यौ ?
तिमीप्रतिको मेरो माया उस्तै छ आजपनि !!
आँखाअघि तिमी भए पुग्छ भन्ने थाहा थियो
उता चोट पुगे यता दुख्छ भन्ने थाहा थियो
के अस्तित्व छ र मेरो दुनियाँमा तिमी बिना
सिर्जनाको धड्कन यो रुक्छ भन्ने थाहा थियो !!
मलाई मेरा दाजुहररूको सम्झना बेहद हुन्छ साथी
यो देशमा निर्मलाहररू चिच्याउदैछन् न्यायका निम्ति
चुपचाप बसेर आँखामा पट्टी बाधेको छ सरकारले !।
This entry was posted in कविता, टुक्रे कविता, मुक्तक and tagged Pallawa, Rukum, Sharma, Sirjana, पल्लवGautam, सिर्जना शर्मा. Bookmark the permalink.
← सहनको पराकाष्ठा
रामराजा तिमिल्सिना का केही टुक्राहरूः →
One thought on “सिर्जना शर्मा का केही मुक्तकहरूः”
Sirjana ka sirjana haru sundar xan. Bhawana le otprot xan.